Halal cosmetics muAfrica uye ayo diaspora - AFRIKHEPRI
Un muAfrica mune maviri ndeMuslim. Yakareba isingatariswe kana kusanzwisisirwa nemahara eindasitiri yezvekushongedza, izvo zvinodiwa zvekunaka zvevakadzi vechiMuslim, kwemakore mashoma, zvave zvichitariswa neiyo nyowani yema brand niche nekubudirira kuri kukura.
Maererano neWorld Summit musi kwechiIslam Economics iyo yakaitwa Dubai mwedzi wapera, pamusika pane zvizoro uye pachake hanya wechiMuzirimu iri kutarisirwa kuwedzera kusvika 74 2020% nokutambanudza mabhiriyoni 80.
Chikamu chemusika chakaoma kutsanangura.
Nhamba yeMuslim yenyika inowanzotaurwa se "nzvimbo yepasi rose". Ichokwadi, iyo yakawanda yemagariro evanhu nemagariro, neenzvimbo dzakasiyana-siyana, madzinza uye tsika. Nhengo yavo inonyanya kushandiswa: maitiro (uye maitiro) eIslam.
Africa uye mahara ayo ari mamiriyoni evanhu vechitendero cheMuslim (vachiita kana kwete). Ive mitsva itsva inonakidza chaizvo nenyika yezvino, asi ivo vachiri vakatendeka kune kutenda kwavo (kana kupfuura kupfuura chizvarwa chevabereki vavo). Kuwana kuenzanisa pakati pemutendo wekutenda, tsika yekunaka uye kugamuchirwa kwenharaunda yavo inogona kuva yakaoma kune vamwe vakadzi vechiMuslim.
"Kunyange kana iwe usingaregi mumuromo wake, tinodya chikamu chakanaka! "...
Izwi rokuti "halal" rinoreva zvose zvinobvumirwa nemutemo sharia, mutemo weIslam. Izvi hazvisi zvekudya chete, sezvatinofunga kakawanda, asiwo mararamiro emitemo, "tsika dzeMuslim". Muitiro wechiMuslim unotaurira kuti munhu haadyi nyama yenguruve kana doro. Kana magwaro echitendero achitaura nezvekudya, zvakadini nekushandiswa kwezvinhu izvi (kunyange munzira duku) mumuviri? Ndiyo Institute of Standardization uye Metrology yeIslamic Countries iyo inotsanangura mazano anoshanda anogadziriswa nevagadziri nevatengesi vezvipfeko zveHalal, maererano neevhangeri dzezvechitendero. Kunze kwemitsipa yemakumbo uye mazino emagetsi anowirirana nemuromo, hapana chinhu chakaoma kwazvo kune zvigadzirwa zvehutsanana uye zvipfeko.
Kusimudzira pfungwa kusvika pakuguma, mamwe mavara akasika zvipfeko izvo maitiro asina zvine yenguruve (mafuta kana gelatin), hapana doro (kunyange doro rinodhaka kana mafuta anodhakwa), kana zvimwe zvipembenene zviduku (cochineal nekuda kwemavara emifananidzo). Aya mabhii anosimbisa Halal Authority Board iyo, tsanangudzo yenyika yose mumashoko ekubvuma.
Yakagadzirirwa vakadzi vechiMuslim, vazhinji (maduku) maronda anotungamirirwa nevakadzi vezvemabhizimisi vanobva kumusangano wevaMuslim, kunyanya mumashure: Jamal (France), Samina Pure Make Up (UK), One Pure (Canada) ), Shfee Halal Care (Netherlands) ...
Africa nepakati mbiri.
MuNorth Africa, nzvimbo yeHarlal ndiyo imwe yezvinhu zvinokosha zvehutungamiri hwehupfumi (kunyanya muMorocco) apo inofanirwa kuita zvose zvingaita kuti magetsi emunharaunda ezvo agadzire uye kutengesa michina yakagadzirwa neHarlal munharaunda. nyika yose.
Muzasi kweSahara Africa, mabhanhire anotarisana nezvipingamupinyi zviviri zvikuru. Kune rumwe rutivi, kufarira kwechokwadi maFrench nemaAmerica. Kune rumwe rutivi, kushandiswa kwezvinhu zvakasikwa zvezvisikwa uye kune "maitiro" ekubika munyika dzavo.
Mapoka makuru "Islam-friendly".
Muna 2012, Colgate-Palmolive yakanga yatengesa halal mazino ekudzivirira mazino pasina chikwama gelatin. Panzvimbo pokushandura zvipupuriro zveHarlal uye kugadziriswa kwemugadziri, maronda akawanda anovimba panzvimbo yekutengeswa kwemitambo yezvigadzirwa zvayo: kunyanya shampoos. Orientalizing pakatengesa uye oriental museki musangano, Unilever naHenkel vatanga michina chete yekutapudzwa kwemvere kwevakadzi vakafukidzirwa. The Unilever Group uye maruva ayo Sunsilk akasika Clean & Fresh shampoo range, yakarongedzwa zvakananga kune vakadzi vakapfeka chifukidziro uye vane bvudzi rinonyanya kukuvadzwa nekukanganiswa uye kusava nemhepo. Henkel yatanga Gliss & Restore yayo "yekutanga capillary chaiyo yevhudzi rakaputirwa. Kana ari mutungamiri wenyika, L'Oréal, inotaura kuti "mushamba wezvipfeko zveHalal imusika watinotarisa, sevamwe, wakapa chido chedu chekukwanisa kunaka".
Kutanga kugadziriswa www.panafricanbeauty.com
Inglot - O2M Halal - Breathable yepikiri yepurasitiki - 619
1 nyowani kubva ku € 20,00
kubvira waMay 26, 2020 1:55
Iyo haina: toluene, formaldehyde, dibutyl phthalate (DBP), camphor
O2 M Ungano - halal (inofema)
Tarisa umambo hwakabatana (2016)